Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.6.2 ကိုနားလည်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ပြန်ကြားရေးအန္တရာယ်လူမှုရေးသုတေသနအတွက်အသုံးအများဆုံးအန္တရာယ်ရှိ၏ ကသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပြီ ထိုသို့နားလည်ရန်အခက်ခဲဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်သုတေသနအတွက်ဒုတိယကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်, သတင်းအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်ထံမှထိခိုက်မှုများအတွက်အလားအလာဖြစ်ပါတယ် (National Research Council 2014) ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်ထံမှပြန်ကြားရေးပျက်ဆီး (ဥပမာ, အလုပ်ဆုံးရှုံး), (ဥပမာ, အရှက်) လူမှုရေး, (ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါ) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ပင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ (ဥပမာတရားမဝင်အပြုအမူများအတွက်ဖမ်းဆီး) စီးပွားရေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်သိသိသာသာ-အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူအကြောင်းကိုပဲဤမျှလောက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်သတင်းအချက်အလက်များအန္တရာယ်နားလည်ပြီးထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အဖြစ် Analog စအရွယ်လူမှုရေးသုတေသနအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့အန္တရာယ်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်စီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်ခက်ခဲသက်သေပြခဲ့သည်။
လူမှုရေးသုတေသီများကအချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်လျော့နည်းကျဆင်းကြောင်းတစ်ခုမှာလမ်းအချက်အလက်များ၏ "ကဲ့သို့ပင် anonymiztion" ဖြစ်ပါတယ်။ "Anonymous" ဟုအဆိုပါဒေတာမှထိုကဲ့သို့သောအမည်, လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အဖြစ်သိသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ဖယ်ရှားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤချဉ်းကပ်မှုလူများစွာနားလည်သဘောပေါက်ထက်အများကြီးလျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းအတွက်နက်ရှိုင်းစွာနှင့်အခြေခံကျကျကန့်သတ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါသည်ဖော်ပြရန်အခါတိုင်း "ကဲ့သို့ပင် anonymiztion," ငါသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအမည်မဖော်ဘဲစစ်မှန်တဲ့အမည်ဝှက်၏အသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးပေးသည်သင်တို့ကိုသတိပေးမှကိုးကားအမှတ်အသားများကိုအသုံးလိမ့်မယ်။
"အမည်မ" ၏ကျရှုံးမှု၏တစ်ဦးကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဥပမာမက်ဆာချူးဆက်အတွက် 1990 မှလာ (Sweeney 2002) ။ အဆိုပါ Group မှအာမခံကော်မရှင် (GIC) အားလုံးပြည်နယ်န်ထမ်းများအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံဝယ်ယူဘို့တာဝန်ရှိတစ်ဦးကအစိုးရအေဂျင်စီဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းကတဆင့်, အ GIC ပြည်နယ်န်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းများစုဆောင်း။ သုတေသနလှုံ့ဆျောဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှာ GIC သုတေသီများဤမှတ်တမ်းများကိုလွှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သို့သော်သူတို့ဒေတာများအားလုံးကိုမျှဝေပေးတော်မမူ မဟုတ်ဘဲသူတို့ထိုကဲ့သို့သောအမည်နှင့်လိပ်စာများအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဤသူဒေတာကို "အမည်ဝှက်" ။ သို့သော်သူတို့ကထိုကဲ့သို့လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်သုတေသီများများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထင်သောအခြားသတင်းအချက်အလက် left (ဇစ်ကုဒ်, မွေးနေ့, လူမျိုးရေးနှင့်လိင်) နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် (အလည်အပတ်ခရီးဒေတာ, ရောဂါ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်း) (ပုံ 6.4) (Ohm 2010) ။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီ "ကဲ့သို့ပင် anonymiztion" ဟုအဆိုပါဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ပုံ 6.4: "Anonymous" သတင်းအချက်အလက်ဖော်ထုတ်သိသာဖယ်ရှားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်န်ထမ်းများ၏ဆေးဝါးကုသမှုအာမခံမှတ်တမ်းများလွှတ်တဲ့အခါမှာဥပမာ, မက်ဆာချူးဆက် Group မှအာမခံကော်မရှင် (GIC) ဖိုင်များအနေဖြင့်အမည်နှင့်လိပ်စာများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအမည်မဖော်ဘဲအမှန်တကယ်အမည်ဝှက်၏အသွင်အပြင်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်ငါစကားလုံး "အမည်မ" ပတ်လည် quotation သင်္ကေတကိုအသုံးပြုပါ။
ကင်းဘရစ်, မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝီလျံဂဟေ၏ဇာတိမြို့၏မြို့ကနေမဲပေးမှတ်တမ်းများဆည်းပူးဖို့ MIT က-paid $ 20 မှာဘွဲ့ရကျောင်းသား Latanya Sweeney-ဖြစ်လျှင်, GIC "အမည်မ" ၏ချို့ယွင်းချက်သရုပျဖျောရန်။ ဤရွေ့ကားမဲပေးမှတ်တမ်းများထိုကဲ့သို့သောအမည်, လိပ်စာ, ဇစ်ကုဒ်, မွေးဖွားသည့်ရက်စွဲနှင့်ကျား, မအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ဆေးပညာဒေတာဖိုင်နှင့်မဲဆန္ဒရှင်ဖိုင်လယ်ကွင်း-ဇစ်ကုဒ်, မွေးဖွားသည့်ရက်စွဲနှင့်လိင်-ဓိပ်ပာ Sweeney သူတို့ကိုလင့်ထားသည်နိုင်ကြောင်း shared ဆိုတဲ့အချက်ကို။ Sweeney ဂဟေရဲ့မွေးနေ့ကိုဇူလိုင်လ 31, 1945 ခဲ့ပါတယ်, နှင့်မဲပေးမှတ်တမ်းများကြောင်းမွေးနေ့နှင့်အတူကိန်းဘရစ်တွင်သာခြောက်လလူတွေကိုထည့်သွင်းကြောင်းသိသည်။ ထို့ပြင်သူတို့သည်ခြောက်လူမျိုး၏, သာသုံးအထီးရှိကြ၏။ နှင့်ထိုလူသုံးယောက်၏, တစ်ဦးတည်းသာဂဟေရဲ့ဇစ်ကုဒ် shared ။ ထို့ကြောင့်မဲပေး data တွေကိုဆေးဘက်မွေးနေ့၏ဂဟေရဲ့ပေါင်းစပ်နှင့်အတူဒေတာ, ကျား, မ, နှင့်ဇစ်ကုဒ်အတွက်မည်သူမဆိုဝီလျံဂဟေဆော်ခဲ့တာကြောင့်ပြသခဲ့သည်။ အနှစ်သာရများတွင်သတင်းအချက်အလက်ဤသုံးပါးကိုအပိုင်းပိုင်းဒေတာအတွက်သူ့ကိုရန်မူထူးခြားတဲ့လက်ဗွေရာဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, Sweeney သူမကသူ့ကိုသူ၏မှတ်တမ်းများမိတ္တူပို့, သူမ၏လုပ်ရပ်များ၏သူ့ကိုအကြောင်းကြားရန်, ဂဟေရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများနေရာချထားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နှင့် (Ohm 2010) ။
6.5 ပုံ: Re-idenification "အမည်ဝှက်" အချက်အလက်များ၏။ Latanya Sweeney အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝီလျံဂဟေ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်မဲပေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ "အမည်ဝှက်" ကနျြးမာမှတ်တမ်းများပေါင်းစပ်ရာမှ Adapted Sweeney (2002) , ပုံ 1 ။
Sweeney ရဲ့အလုပ်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအသိုင်းအဝိုင်းထံမှသက်တမ်းချမှတ်စီစဉျ Re-ဖော်ထုတ်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှု၏အခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖော်ပြသည်။ ဤအတိုက်ခိုက်မှုများအတွက်, ကိုယ်နှိုက်ခြင်းဖြင့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ပြသမရာနှစ်ခုဒေတာအစုံ, နှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်, ဤချိတ်ဆက်မှတဆင့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်ကြုံတွေ့နေရသည်။
Sweeney ရဲ့အလုပ်နှင့်အခြားဆက်စပ်အလုပ်တုံ့ပြန်ခုနှစ်, သုတေသီများသည်ယခုယေဘုယျအားဖြင့် (PII) ပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်-အားလုံးဒါခေါ် "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်" ကိုဖယ်ရှား (Narayanan and Shmatikov 2010) ၏လုပ်ငန်းစဉ် -during "အမည်မ။ " ထို့ပြင်များစွာသောသုတေသီများ ယခုတရားမဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေလေ့လာမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများအဖြစ်အချို့သောထိုကဲ့သို့သောဒေတာ-, ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများ, အဖြေတွေကိုဖြစ်ကောင်းပင်ပြီးနောက်လွှတ်ပေးရန်လည်းအထိခိုက်မခံအပြုအမူ-ဖြစ်ကြောင်း "အမည်မ။ " နားလည်သဘောပေါက်သို့သော်ကျွန်မပေးရအကြောင်းကိုပေါ့သောဥပမာလူမှုရေးသုတေသီများလိုအပျကွောငျးအကြံပြု သူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်။ တစ်ဦးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်, ကအားလုံးကိုဒေတာအလားအလာသက်သေပြဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဒေတာအလားအလာအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းယူဆရန်ပညာရှိဖြစ်၏။ တနည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲအချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်စီမံကိန်းများကို၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအစုသက်ဆိုင်ကြောင်းစဉ်းစားခြင်းထက်, ငါတို့ကသက်ဆိုင်-မှအချို့ဒီဂရီ-အားလုံးကိုစီမံကိန်းများကိုယူဆသငျ့သညျ။
ဒီကျအောင်နှစ်ယောက်စလုံးရှုထောင့်ကတော့ Netflix နဲ့ဆုအားဖြင့်သရုပ်ဖော်ကြသည်။ အခန်း5တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ပင်, Netflix နီးပါး 500,000 အဖွဲ့ဝင်များကထောက်ပံ့ပေးသန်း 100 ရုပ်ရှင် ratings ဖြန့်ချိခြင်း, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတွေရုပ်ရှင်အကြံပြုဖို့ Netflix ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်ကြောင်း algorithms တင်သွင်းဘယ်မှာဖွင့်ခေါ်ဆိုခရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာထုတ်မီ, Netflix ဟာထိုကဲ့သို့သောအမည်များအဖြစ်မဆိုသိသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သူတို့ကအစအပိုခြေလှမ်း သွား. (ဥပမာ,3ကြယ်များ4ကြယ်များထံမှအချို့သော ratings ပြောင်းလဲနေတဲ့) မှတ်တမ်းများအချို့အတွက်အနည်းငယ်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။ မကြာမီသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုနေသော်လည်း, data ကိုအမည်မသိအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့နေဆဲဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်, သူတို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒေတာဖြန့်ချိခဲ့ကြရုံနှစ်ပတ်အတွင်းအပြီး, Arvind Narayanan နှင့်ဗီ Shmatikov (2008) ကတိကျတဲ့လူရဲ့ရုပ်ရှင်ဦးစားပေးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ဖြစ်နိုင်သမျှခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ Re-ဖော်ထုတ်ခြင်းတိုက်ခိုက်ရန်လှည့်ကွက် Sweeney ရဲ့ဆင်တူခဲ့သည်: အတူတကွနှစ်ခုသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များ, အလားအလာအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်မျှမသိသာတဲ့ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်လူရဲ့အထောက်အထားတွေကိုပါရှိသည်တစ်ခုနှင့်တသားတပေါင်းစည်း။ ဤအဒေတာအရင်းအမြစ်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုလုံခြုံစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ပေါင်းစပ်ကြသည်သောအခါ, ပေါင်းစပ် Datasets အချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Netflix ဟာအချက်အလက်များ၏ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီမှာဖြစ်ပျက်နိုင်ကြောင်းကိုမည်သို့ပါပဲ။ ငါသည်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အရေးယူနှင့်ဟာသရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုငါ၏အကြံအစည်ဝေမျှဖို့ရွေးချယ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ငါကဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုကျနော့်အမြင်ဝေမျှဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့ဆိုပါစို့။ အကြှနျုပျ၏ Co-အလုပ်သမား Netflix နဲ့ဒေတာ၌ငါ့မှတ်တမ်းများကိုရှာဖွေသူတို့ကိုငါနှင့်အတူမျှဝေပါတယ်ကွောငျးသတငျးအခကျြသုံးလို့ရတယ်, ငါဝေမျှသောသတင်းအချက်အလက်ရုံဝီလျံဂဟေရဲ့မွေးနေ့, ဇစ်ကုဒ်နှင့်လိင်ကဲ့သို့ထူးခြားသောလက်ဗွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကဒေတာ၌ငါ့ထူးခြားတဲ့လက်ဗွေရာကိုတွေ့ပါလျှင်ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ငါဝေမျှဖို့မရှေးခယျြကြောင်းရုပ်ရှင်အပါအဝင်အားလုံးရုပ်ရှင်များ, အကြောင်းကိုငါ့အ ratings သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဒီလိုမျိုးအပြင်, Narayanan နှင့် Shmatikov လည်းလူအတော်များများဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ရုပ်ရှင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဒေတာနှင့်အတူ Netflix နဲ့ data တွေကိုပေါင်းစည်းတချို့လူတွေရွေးယူဘူးသောပတျသကျတဲ့ကျယ်ပြန့်တိုက်ခိုက် -one လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့ကြောင်းပြသ အင်တာနက်ကို Movie, Database ဟာ (IMDb) ရက်နေ့တွင် post ရန်။ တိကျတဲ့လူတစ်ဦး-ပင်သူတို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ရုပ်ရှင်-နိုင်ပါတယ် ratings သူတို့ရဲ့ set ကိုတစ်မူထူးခြားတဲ့လက်ဗွေကြောင်းအတော်လေးရိုးရှင်းစွာဆိုသတင်းအချက်အလက်။
အဆိုပါ Netflix နဲ့ဒေတာတွေကိုဖြစ်စေမယ့်ပစ်မှတ်သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်တိုက်ခိုက်အတွက် re-ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်သော်လည်းနေဆဲအနိမ့်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ရုပ်ရှင် ratings အလွန်အထိခိုက်မခံမထင်ကြဘူး။ ကြောင်းယေဘုယျတှငျစစျမှနျသောဖြစ်စေခြင်းငှါစဉ်အခါ, Datasets အတွက် 500,000 ပြည်သူပြည်သားအချို့အဘို့, ရုပ်ရှင် ratings အတော်လေးထိခိုက်မခံဖြစ်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်းမှတုန့်ပြန်နေတဲ့ဗီရိုလိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦး Netflix နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတန်းစား-action ကိုဝတ်စုံကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ပြဿနာကသူတို့တရားစွဲဆိုမှုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုဖွင့် (Singel 2009) :
"[M က] ovie နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဒေတာတစ်ဦး ... အလွန်အမင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အထိခိုက်မခံသဘာဝတရား၏သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ရုပ်ရှင်ဒေတာတစ်ဦး Netflix နဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားဖျောထုတျနှင့် / သို့မဟုတ်သှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု, အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နှင့်မုဒိမ်းမှုကနေလိင်, စိတ်ရောဂါ, အရက်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူနှင့်သားကောင်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအလွန်အမင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့။ "
အဆိုပါ Netflix နဲ့ Prize ကိုအချက်အလက်များ၏ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်းအားလုံးဒေတာအလားအလာသက်သေပြဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဒေတာအလားအလာအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြကြောင်းကိုနှစ်ဦးစလုံးဖော်ပြသည်။ ဤအချက်မှာ, သင်သည်ဤသာကလူအကြောင်းကိုဖြစ်ဆီကကြောင့် data ကိုသက်ဆိုင်သည်ဟုမထင်ပေလိမ့်မည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကသောအမှုမဟုတ်ပါ။ ပြန်ကြားရေးဥပဒေတောင်းဆိုချက်အရတစ် Freedom ကိုတုံ့ပြန်ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်စီးတီးအစိုးရပစ်ကပ်အပါအဝင် 2013 ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်ရှိတိုင်းတက္ကစီစီး၏မှတ်တမ်းများဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ကြိမ်, တည်နေရာနှင့်ခပမာဏချွတ် drop (ပြန်လည်သိမ်းဆည်းအခန်း2ကနေကြောင်း Farber (2015) ) အလုပ်သမားဘောဂဗေဒအတွက်အရေးကြီးသောသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့အလားတူဒေတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့ကလူအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးမထင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက္ကစီခရီးစဉ်အကြောင်းကိုဤရွေ့ကား data တွေကိုညင်သာပျော့ပျောင်းထင်ပေမယ့်အန်သိုနီ Tockar ဒီတက္ကစီ Datasets တကယ်ကလူအကြောင်းကိုအလားအလာအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားပါရှိသောသဘောပေါက်လာတယ်။ ဥပမာသူက New အတွက် Hustler ကလပ်-ကြီးမားသောချွတ်ကလပ်နယူးယောက်-အကြားသန်းခေါင်နဲ့6နာရီတွင်စတင်အားလုံးခရီးစဉ်မှာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Drop-ချွတ်နေရာများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ရှာဖွေရေးထင်ရှား-အတွက် Hustler ကလပ်မကြာခဏသူအချို့လူများ၏လိပ်စာများအနှစ်သာရ-စာရင်းတစ်ခု (Tockar 2014) ။ ဒါဟာဒေတာဖြန့်ချိသည့်အခါမြို့အစိုးရစိတ်ထဲ၌ဤရှိခဲ့ကြောင်းစိတ်ကူးရန်ခဲယဉ်းသည်။ တကယ်တော့ဒီတူညီတဲ့ technique ကိုတမြို့လုံး-ဆေးပညာဆေးခန်းတစ်ခုကအစိုးရအဆောက်အဦ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက်မဆိုရာအရပ်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကို၏အိမျလိပ်စာများကိုရှာတွေ့ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အတော်လေးကျွမ်းကျင်လူတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သူတို့လွှတ်ပေးရန်-နှင့်ဤအမှုများကိုအဘယ်သူမျှမနေဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းယင်းဒေတာအတွက်သတင်းအချက်အလက်များအန္တရာယ်ခန့်မှန်းရန်ပျက်ကွက်နိုငျသော Netflix နဲ့ဆုနှင့်နယူးယောက်မြို့တက္ကစီ data တွေကိုပြသထူးခြားတဲ့ဆိုလိုတယ်ဤကိစ္စနှစ်ခု (Barbaro and Zeller 2006; Zimmer 2010; Narayanan, Huey, and Felten 2016) ။ နောက်ထပ်များစွာသောဤကဲ့သို့သောအမှုများတွင်, ပြဿနာ data တွေကိုအစဉ်အဆက်ဒေတာလွှတ်ပေးရန်မှုကိုပွုပွငျရာတှငျများ၏အခက်အခဲကိုညွှန်း, အွန်လိုင်းနေဆဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ စုပေါင်းဤဥပမာ-အဖြစ်အရေးကြီးသောနိဂုံးချုပ်ဖို့ privacy ကို-ခဲအကြောင်းကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံသုတေသန။ သုတေသီများအားလုံးဒေတာအလားအလာသက်သေပြဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဒေတာအလားအလာအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းယူဆသငျ့သညျ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ရှိသမျှဒေတာအလားအလာသက်သေပြဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဒေတာအလားအလာအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြကြောင်းကိုအချက်အလက်များမရှိရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်လည်းမရှိ။ သို့သျောလညျးသငျသညျဒေတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်လျှော့ချဖို့တလမ်းတည်းနေတဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးလိုကျနာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအစီအစဉ်သည်သင်၏ဒေတာပေါက်ကြားပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးယိုစိမ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါဘူးလျှင်အန္တရာယ်လျော့နည်းကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းကိုလျော့ချပါလိမ့်မယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံစီမံကိန်းများ, ဘေးကင်းလုံခြုံသောလူ: အဆိုပါထိုကဲ့သို့သောသုံးစွဲဖို့ encryption ကို၏ထားတဲ့ပုံစံအဖြစ် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဗြိတိန်မှာ Data န်ဆောင်မှုများ helpfully သူတို့ကငါး Safe ကိုပဌနာငါးအမျိုးအစားသို့ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်၏ဒြပ်စင်စုစည်း လုံခြုံအပြင်အဆင်များ, ဘေးကင်းလုံခြုံဒေတာနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရလဒ် (စားပွဲ 6.2) (Desai, Ritchie, and Welpton 2016) ။ ငါး Safe အဘယ်သူအားမျှတစ်ဦးချင်းစုံလင်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေး။ ဒါပေမဲ့အတူတူသူတို့ကအချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်သောအချက်များတစ်အစွမ်းထက် set ကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
စားပွဲတင် 6.2: အဆိုပါ "ငါး Safe" ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းများအတွက်အခြေခံမူဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးမှာ Data ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်ကွပ်မျက် (Desai, Ritchie, and Welpton 2016)
ဘေးကင်းလုံခြုံသောလူ Access ကိုဒေတာနှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်သူတွေကို (ဥပမာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသင်တန်းပေးခြင်းခံကြသူတွေကို) ကိုကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်
ဘေးကင်းလုံခြုံ settings ကို ဒေတာများကိုသင့်လျော်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဥပမာ, သော့ခတ်တဲ့အခန်း) နဲ့ကွန်ပျူတာများထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်နှင့် software (ဥပမာ, စကားဝှက်ကာကွယ်မှုစာဝှက်ထားတဲ့) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ဘေးကင်းလုံခြုံ output ကို သုတေသန output ကိုမတော်တဆ privacy ကိုချိုးဖောက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါတယ်
သူတို့ကိုသင်အသုံးပြုနေသည်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အပြင်, သတင်းအချက်အလက်အန္တရာယ်အထူးသဖြင့်အဓိကဖြစ်ပါတယ်ရှိရာသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးခြေလှမ်းသည်အခြားသုတေသီများနှင့်အတူဒေတာခွဲဝေမှုဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များအကြား data ကိုခွဲဝေမှုသိပ္ပံနည်းကျကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏အမာခံတန်ဖိုးကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကိုအလွန်သိကျွမ်းရာအတိုးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဤတွင် Commons ၏ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်ဒေတာခွဲဝေမှု၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြထားပုံကိုဖွင့် (Molloy 2011) :
သုတေသီများ, မျိုးပွားအတည်ပြုရန်နှင့်စာပေအစီရင်ခံဖြစ်ကြောင်းရလဒ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့ဆိုလြှငျ "ဒေတာမှ Access ကိုအခြေခံသည်။ အဆိုပါယူဆတစ်ဦးအားကြီးသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ရင်လည်းမရှိမဟုတ်လျှင်, ဒေတာအပြည့်အဝထုတ်ဖော်နှင့်လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်မဖြစ်စေ, ထိုဖြစ်ရပါမည်။ "
သို့သျောလညျး, အခြားသုတေသီနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒေတာဝေမျှခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏သင်တန်းသားများအတွက်သတင်းအချက်အလက်အန္တရာယ်တိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်က data တွေကိုခွဲဝေမှုသည်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သင်တန်းသားများအတွက်သတင်းအချက်အလက်အန္တရာယ် minimize ဖို့တာဝန်နှင့်အတူ data share ဖို့တာဝန်အကြားအခြေခံကျတင်းမာမှုဖန်တီးထင်ရပေမည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီအကြပ်အတည်းကပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပြင်းထန်မဟုတ်ပါဘူး။ ယင်းအစားကြောင့်စဉ်ဆက်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုအမှတ်သင်တန်းသားများကို (ပုံ 6.6) မှလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အန္တရာယ်မှအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရောနှောပေးနှင့်အတူတစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်ကျဆင်းအဖြစ်ဒေတာခွဲဝေမှုကိုစဉ်းစားရန် သာ. ကောင်း၏။
တဦးတည်းအစွန်းရောက်မှာ, သင်သင်တန်းသားများကိုအန္တရာယ် minimize လုပ်ဒါပေမယ့်လည်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှအကျိုးအမြတ် minimize လုပ်ရသောအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒေတာကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ အခြားအစွန်းရောက်မှာ, သငျသညျဒေတာ "အမည်ဝှက်" နှင့်လူတိုင်းအတွက် posted ရှိရာ, လွှတ်ပေးရန်နှင့်မေ့လျော့နိုင်ပါတယ်။ , ဒေတာထုတ်မဆွေမျိုးလွှတ်ပေးရန်နှင့်မေ့လျော့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်သင်တန်းသားများကိုအဆင့်မြင့်အန္တရာယ်မှနှစ်ဦးစလုံးပိုမိုမြင့်မားအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီနှစျခုအစွန်းရောက်ဖြစ်ပွားမှုအကြား၌ငါခိုင်ခံ့သောဥယြာဉျချဉ်းကပ်မခေါ်ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့အပါအဝင် hybrids တွေကိုတစ်အကွာအဝေးဖြစ်ကြသည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုလက်အောက်တွင်, ဒေတာအချို့သောသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူအဘယ်သူအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ (တစ်ဦး IRB နှင့်ဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်ကနေဥပမာကြီးကြပ်) အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူတွေ့ဆုံရန်သောသူတို့နှငျ့အတူမျှဝေနေကြသည်။ The Wall ဥယျာဉ်ကိုချဉ်းကပ်လွှတ်ပေးရန်၏အကျိုးကျေးဇူးများများစွာကိုပေးလျော့နည်းအန္တရာယ်နှင့်အတူမေ့လျော့။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီလိုချဉ်းကပ်နည်းမေးခှနျးမြားစှာ-သောသူတို့သည်အဘယ်သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်နှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဘို့, access ကိုရှိသင့်သည်, ခိုင်ခံ့သောဥယြာဉျကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တွေနဲ့ထိန်းသိမ်းမှပေးဆောင်စသည်တို့ကို-ပေမယ့်ဒီကျော်လွှားနေကြသည်မဟုတ်သင့်ပါတယ်သူကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ တကယ်တော့သုတေသီများထိုကဲ့သို့သောမီချီဂန်တက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်လူမှုရေးသုတေသနများအတွက် Inter-တက္ကသိုလ် Consortium ၏ဒေတာ archive ကိုအဖြစ်, အခုသုံးနိုငျသောအရပ်တွင်ရှိပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်တံတိုင်းကာရံထားသောဥယျာဉ်ရှိပါတယ်။
ပုံ 6.6: ဒေတာများလွှတ်ပေးရန်မဟာဗျူဟာတစ်ခုစဉ်ဆက်တလျှောက်လဲကျနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤစဉ်ဆက်အပေါ်ဖြစ်သင့်အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၏တိကျအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေါ်မူတည်နှင့် Third-party ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်အမှု၌အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးသင့်လျော်သောချိန်ခွင်လျှာဆုံးဖြတ်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒီမျဉ်းကွေး၏အတိအကျကိုအသွင်သဏ္ဌာန်ဒေတာနှင့်သုတေသနရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုအပေါ်မူတည် (Goroff 2015) ။
ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာသင့်ရဲ့လေ့လာမှုကနေဒေတာ, အဘယ်သူမျှမခွဲဝေမှု၏စဉ်ဆက်ပေါ်တံတိုင်းကာရံထားသောဥယျာဉ်တော်ဖြစ်နှင့်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်မေ့လျော့သင့်သလဲ ဒါဟာသင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပေါ်မူတည်: သုတေသီများ, ကောင်းတဲ့အ, တရားမျှတမှုနှင့်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား Persons များအတွက်လေးစားဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီရှုထောင့်ကနေ Viewed, ဒေတာခွဲဝေမှုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ conundrum မျှမက, ဒါကြောင့်ကိုယ့်တဦးတည်းသုတေသီများအနေနဲ့သင့်လျော်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်သောသုတေသနများအများအပြားရှုထောင့်သည်။
ကျနော့်အမြင်ရှိသူတို့က၎င်း၏အန္တရာယ်များ-ထားတဲ့ခြောကို real-နှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျစ်လျူရှုနေကြသည်များမှာအာရုံစိုက်နေကြသည်ကြောင့်အချို့ဝေဖန်သူများကယေဘုယျအားဖြင့်ဒေတာများခွဲဝေမှုဆန့်ကျင်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်အနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်ချင်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, ကားများသေဆုံးမှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလတာဝန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မောင်းနှင်မှုကိုပိတ်ပင်ရန်ကြိုးစားပါဘူး။ မောင်းနှင်မှုအများကြီးအံ့သြဖွယ်အမှုအရာဖွဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့, မောင်းနှင်မှုတားမြစ်ရန်တောင်းဆိုမှုစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယင်းအစားလူ့အဖွဲ့အစည်း (ဥပမာအချို့အသက်အရွယ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အချို့သောစာမေးပွဲများကူးမြောက်ရန်) မောင်းနှင်နိုင်သူအပေါ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ (အမြန်နှုန်းကန့်သတ်အောက်မှာဥပမာ) မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်နေရာ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းထိုအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပြဋ္ဌာန်းအတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်လူတွေ (ဥပမာ, ရဲ) ရှိပြီး, ငါတို့သည်သူတို့ကိုချိုးဖောက်ဖမ်းမိသူကလူကိုအပြစ်ပေး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမောင်းနှင်မှုကိုထိန်းညှိဖို့သက်ဆိုင်ကြောင်းမျှမျှတတစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ဤတူညီသောမျိုးကိုလည်းဒေတာခွဲဝေမှုဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အဲဒီအစားဒေတာခွဲဝေမှုအတွက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဆံပိုင်အငြင်းပွားမှုများအောင်ထက်, ငါငါတို့သည်အန္တရာယ်များကိုလျော့ချခြင်းနှင့်ဒေတာများခွဲဝေမှုအနေဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပုံကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်အများဆုံးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေမည်ဟုထင်သည်။
ကောက်ချက်ချရန်, သတင်းအချက်အလက်အန္တရာယ်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ထားပါတယ်, ဒါကြောင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်တွက်ချက်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါကြောင့်အားလုံးဒေတာအလားအလာသက်သေပြခြင်းနှင့်အလားအလာအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းယူဆရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနလုပ်နေစဉ်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်လျော့နည်းကျဆင်းစေရန်, သုတေသီများဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးလိုကျနာနိုငျသညျ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအန္တရာယ်သည်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အတူဒေတာဝေမျှထံမှသုတေသီများတားဆီးမထားဘူး။